चाणक्य नीतिः कुनै नयाँ कामको थालनी अघि यी ३ प्रश्नको जवाफ खोज्नुहोस् , सफलताको बाटो हुनेछ सहज | Ratopati
आचार्य चाणक्य नीति शास्त्रमा जीवनसँग जोडिएका थुप्रै पाटोको कुरा गरिएको छ । चाणक्यले धनm व्यापार, सफलता र स्वास्थ्य सम्बन्धि थुप्रै समस्याको हल पनि बताएका छन् । चाणक्यका अनुसार हामी धेरैजसो कुनै पनि कार्यका लागि सोच विचार नै नगरी त्यसमा लाग्ने गर्छौं जसका कारण सफलताका लागि संशयको स्थिती बन्ने गर्छ । चाणक्यका अनुसार कुनै पनि नयाँ कार्यको सुरुवात अघि व्यक्तिले तीन प्रश्नको जवाफ पाउन आवश्यक छ । चाणक्य नीति शास्त्रमा यी तीन प्रश्नको जवाफ दिइएको छ।
१. यो कार्य किन गर्ने ?
चाणक्यका अनुसार कुनै पनि कार्यको उद्देश्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अस्पष्टता, अज्ञानता र भ्रमको स्थितीमा काम गर्नु राम्रो होइन । यस्ता कार्यमा सफलता पाइँदैन । कार्य व्यवहारमा मानिसहरुको नियन्त्रण रहँदैन । त्यसैले उक्त काम किन गरिँदैछ भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
२. यो कामको परिणाम के होला ?
चाणक्यका अनुसार कार्यगत परिणाम के हो, कार्य पूरा भएपछि अल्पकालीन र दीर्घकालीन परिणाम कस्ता हुनेछन् ? नीजि लाभको दायरामा बसेर गरिएको कार्यको दीर्घकालीन परिणाम राम्रो हुँदैन । अन्त्यमा यसले अहित नै निम्त्याउँछ । त्यसैले मानिसले कुनै पनि कार्यको सुरुवात अघि नै त्यसको परिणामबारे विचार गर्न आवश्यक हुन्छ ।
३. के म सफल हुन सकूँला ?
चाणक्यका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नीजि योग्यता र संकल्पशक्तिसँग सम्बन्धित छ । कार्यको उद्देश्य, परिणामबारे विचार गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो सफलतामाथि पनि विचार गर्नुपर्छ । आजको समयका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । धेरैजसो मानिसहरु आत्म मूल्यांकन बिना नै कार्यमा जुट्ने गर्छन् । यस्तोमा उनीहरुको सफलतामाथि संशयको स्थिती रहन्छ ।